မယုံလွယ်နှင့်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » မယုံလွယ်နှင့်….
Posted by Ko out of... on Jun 20, 2013 in Short Story | 13 comments
– ၁၂၆၇ခု၊ တော်သလင်းလဆန်း (၁၅)ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ပန်းတနော်မြို့ ရွှေမြင်တင်စေတီတော်၏ ဘုရား ရာဟုဒေါင့် ကုန်းတောင်ပေါ်တွင် နတ်ဝတ်တန်ဆာတို့ကို ၀တ်ဆင်လျှက် ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တောက်ပစွာသောလူတစ်ယောက်သည် မတ်တပ်ရပ်လျှက် ဘုရားကိုအာရုံပြုနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း….ထိုနေ့ကား လပြည့်နေ့ဖြစ်သဖြင့် ဥပုသ်သည်တို့သည် ထိုထူးဆန်းသော အချင်းအရာကို အံ့အားသင့်စွာ ၀ိုင်းအုံကြည့်ကြကြောင်း….ထိုသတင်းသည် ပျံ့နှံ့ကာ (၈) နာရီခွဲ အချိန်လောက်တွင် ထိုနတ်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အနီးတွင် ၀ိုင်းအုံကြည့်ရှု့ကြသော လူဦးရေသည် တစ်ထောင်ကျော်မျှ ရှိမည်ဟုထင်ရကြောင်း….ထိုသူ၏အနီးပူလွန်းလှ သဖြင့် မည်သူမျှမကပ်နိုင်ကြချေ….
အချို့သောသူတို့က ထိုသူသည်… နတ်ဖြစ်သည်…အချို့က ဗြဟ္မာဖြစ်သည်ဟု အသီးသီးငြင်းခုံကြသည်…အချို့က ပုဆစ်ဒူးတုပ်ပြီး ရှိခိုးကြကြောင်း…ပရိတ်သတ်အလည်တွင်ထိုသူသည်ဘုရားကို ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး ကြီးစွာသော အခိုးအလျှံသည် ထိုသူ၏ကိုယ်ပေါ်မှထွက်ပြီးလျှင် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း….
– အထက်ပါသတင်းကို ဖတ်ရသောမြန်မာလူမျိုး တစ်ရာလျှင် ကိုးဆယ်ခန့်တို့မှာ အတော်ထူးသောအခြင်းအရာဘဲဟု မှတ်ထင်ပြီး ယုံကြည်ကြပေလိမ့်မည်…ကျန်ဆယ်ဦးလောက်မျှသာလျှင် ဟုတ်နိုင်ရန်ခဲယဉ်းသည်ဟု မယုံကြည်ဘဲ ရှိပေမည်…
ထိုဆယ်ဦးကား ဥာဏ်ကို အသုံးပြုသော သူများပင်တည်း….မစဉ်းစားဘဲ ယုံလွယ်သူပေါသောတိုင်းပြည်သည် အောက်တန်းကျသေးသော တိုင်းပြည်ဖြစ်၏…..
အသိဥာဏ်ကို ချင့်ချိန်နိုင်ရန် ၄င်းတိုင်းပြည်၏ သတင်းစာကိုကြည့်ပြီး အကဲခတ်နိုင်၏….သတင်းစာများတွင် မြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်မှ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသော ဥစ္စာစောင့်မ၊ နတ်ကပေးသော ကလေး စသည်ဖြင့် ခေါင်းစီးတပ်ထားသော ဆောင်းပါးများကို အလုအယှက်ဖတ်သမျှကာလ ပတ်လုံး မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အဆင့် အတန်းသည် ခေတ်မှီရန်များစွာ လိုသေးသည်ဟု ဆိုရပေမည်ဖြစ်သည်။ ပြောတိုင်းမယုံနှင့်…ယုံတိုင်းလည်း မပြောနှင့်…ချင့်ချိန်နှိုင်းဆပြီးမှသာ ပြုလုပ်ပြောဆိုရာ၏…
– ဦးသန့်၏လက်ရွှေးစင် စာစုမှ…..ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်.
အဲလို သူများယောင်လိုယောင် အမောင်တောင်မှန်းမြောက်မှန်း မသိတဲ့သူ တွေ အများကြီး အများမှအများကြီး…
လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်လာပေမယ့် စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျနေသူတွေ အများကြီး အများမှအများကြီး..
ပညာတွေလန်ပြန်ထွက်နေအောင်တတ်နေပေမယ့်.. ကိုယ်ချင်းစာတရားခေါင်းပါးနေသူတွေ အများကြီး အများမှအများကြီး…
လောကကြီးမှာ ဖြစ်နိုင်ခဲတဲ့အရာတွေ ရှိသလို မဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာတွေလည်း ရှိပါ့……….
တခါတုန်းက နိုင်ငံခြားသား တယောက်နဲ့သရဲ အကြောင်း ပြောဖူးပါရဲ့…..
သူပြောတဲ့အတိုင်းဆို သရဲဆိုတာကို သူ့ အဘိုးလက်ထပ်ကစပီး သူ့ လက်ထပ်အထိ သရဲခြောက်ပေ့ဆိုတဲ့ နေရာတွေ သွားပီး သရဲ ကို မြင်ဖူးအောင် ကြိုးစားကြသတဲ့…..
ဒါပေမဲ့ သရဲ တကောင်မှ မမြင်ဖူးပါဖူးတဲ့………….
အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း သရဲခြောက်တဲ့ နေရာတွေမှာနေဖူးပါတယ်…..
တကယ် မမြင်ဖူးတာပါ….. ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ငွေ့ ငွေ့ လေးလည်း မမြင်ဖူးဘူး…. အကောင်အထည်လိုက်လည်း မမြင်ဖူးဘူး…. ဘုန်းနိမ့်လို့ မြင်ကြေးဆိုလည်း အမတွေ ညီမတွေ ကြောင့်လည်း ခနခန ဘုန်းနိမ့်မယ့် အဖြစ်ကြုံဖူးပါတယ်… ဒါလည်း မမြင်ဖူးဘူး….. တရားထိုင်လို့အဆင့်တဆင့်ရောက်ရင် သရဲတွေက အနားလာပီး အမျှ တောင်းခံတယ်ဆိုလို့ … ဆယ်ရက်စခန်းမှာ ကျကျနန ထိုင်ကြည့်ဖူးပါတယ်… ကျွန်တော်ကပဲ ထိုင်နည်းမကျတာလား ပါရမီအထုံ မပါတာလား မပြောတက် တခါမှ ကို သရဲအနားမကပ်ပါ…..
ဒါက သရဲအကြောင်း… နတ်တို့ဘာတို့ ဆို ပိုဆိုး….
ကျွန်တော်လည်း ဗုဒ္ဒဘာသာပါ…. ကံ ရဲ့ အကျိုးတော့ ယုံပါတယ်…. ရတနာသုံးပါးလည်း ဆည်းကပ်ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် ၀ိညာဉ်နဲ့နတ်လောကတော့ မယုံချင်ဖူးရယ်…… မြင်မှ မမြင်ရတာကိုး…. ပုရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်ကို အလွတ်ရမယ့် အစား မြန်မာလို နားလည်ပီး အထဲကပါတဲ့ အချက်တွေကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဖို့ ပဲ အားသန်ပါတယ်… အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် အလွတ်ကျတ်ဖို့ပျင်းတာလည်း ပါပါတယ်….. အဲ့ဒါအလွတ်ရမယ့် မိန်းမရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း ငှတ်ပျောတုံး ဖတ်ရမှာပဲ…..
အကျဉ်းချုပ်တော့ အဲ့ဒီလိုမျိုး သတင်းတွေ မြင်ရင်တော့ ယေဘုယျအားဖြင့် မယုံတာ အမှန်ပဲ…..
အဟမ်း.. ဖတ်ပြီးဆဲတော့မယ့်သူတွေထွက်လာဦးမဟ ဆိုပြီး.. ဆက်ဖတ်တော့.. ရေးသူဦးသန့်ဖြစ်နေတယ်…
ဦးသန့်ရဲ့.. စကားတခွန်း(စာတခွန်း) သတိရတယ်..
အဲဒါ.. ရွှေအိမ်စည်ဘယ်ကနှိုက်လာတယ်မသိ.. ဒီထဲကဖိုရမ်မှာတင်ထားတာ.. ဖိုရမ်လည်း.. အမျိုးကောင်းသားတွေကောင်းမှုနဲ့.. အနိစ္စသဘောကိစ္စချော..
ဦးသန့်များ.. အသက်ရှိနေသေးရင်.. အခုမြန်မာတွေလုပ်ပုံကြည့်.. အဲဒီခေတ်ကထက်.. ဟိန္ဒူအမျိုးကောင်းသားကြီးကောင်းမှုတော် ၀ိပဿနာတွေလုပ်ပုံတိုးနေတာတွေ့ရင်.. .. ဘာပြောမလည်းမသိ..
မြန်မာ့အမြင်ကို ကမ္ဘာအမြင်နဲ့ ဦးသန့်က ရေးပြသွားတာပါသကား။
ငယ်တုန်းကတော့ တိမ်တွေထဲ မှာ ရဟန်းတွေ ကြွ နေတယ် ဆိုပြီး လူတွေ ထိုင်ကန်တော့ နေတာ မို့ ကိုယ်လဲ ယောင်ပေါင် ပြီး ကန်တော့ ခဲ့ဖူး တယ် ကိုout of… ရေ့။
အော် လက်စသတ်တော့ သူချစ်တာ ခန္ဓာသုခ သွေးဆေးကိုး။ အဲ ယောင်သွားလို့ ကြော်ငြာဖြစ်သွားတယ်။ မိုးပြာဆရာတော် ko out of ပါလား။ အဲဒါကို ဦးသန့်ရေးတာ ကျနော်လည်း ဖတ်ဖူးပါသဗျာ။ ဘယ်သူမှတော့ ခုခေတ်ကြီးမှာ အဲဒီလို ရေးရင် သိပ်ယုံလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ ယုံလောက်တဲ့ အကြောင်းရှိရင်လည်း ယုံချင် ယုံကြမှာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အတွက်တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တန်ခိုးဆိုတာ အစိန္တေယျ ဖြစ်လေတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာ အံ့စရာ ချီးမွမ်းစရာ ဖြစ်အောင် ရေးပြရင်လည်း ယုံကြမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို ယုံတာလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ပဲကိုး။ တရားလည်း တရားပါတယ်။ အခြားဘာသာဝင်တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဥပမာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေဆိုရင် သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို “သေခြင်းကို အောင်နိုင်သူ” ဆိုပြီး စာအုပ်တွေတောင် ရေးသားတယ်။ ယုံလည်း ယုံတယ်။ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေဆိုလည်း သူတို့ ကိုးကွယ်ရာကို အမလေး ရေးထားလိုက်တဲ့ ဂုဏ်တော်တွေမှ အများကြီးပဲ။ အဲဒါကိုလည်း ပညာတတ်တွေက အစကို မျက်စိမှိတ်ယုံတယ်။ အခြားလူတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်တိုးတတ်တာ မတိုးတတ်တာသည် ကောင်းစွာခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ အစိုးရအပေါ်မှာ အများကြီး တည်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ တမျိုးသားလုံး ပညာတတ်မှုတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒါလဲ ခုနပြောသလို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခြင်း မရှိခြင်း အပေါ်မှာ အများကြီး တည်ကြောင်းပါ။
မိုးပြာဆရာ ဦးညာနတို့ ဘာတို့လည်း ကိုးကွယ်သူများလာရင် အဲဒီလို ရေးပေါ့ဗျာ။ ရေးလည်း ရေးမှာပါ။ အခုတောင် ဦးညာနကို ဗုဒ္ဓလို့ ရေးနေသေးတာပဲ။
ကြုံလို့ အပြင်မှာ ကြားတဲ့ rumor လေးမေးလိုက်အုံးမယ်။ ကျနော် ကြားတာက မိတ်ဆွေတို့ ဒုဂိုဏ်းချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက အရင်တုန်းက ဝိပဿနာ ကမ္မဌာန်းကျောင်းလေးမှာ ချက်ရေး ပြုတ်ရေးလုပ်ရတဲ့ မီးဖိုချောင်ဘုန်းကြီးလေးတပါးဆို။ အဲဒါ ပထမပါရာဇိက သိက္ခာပုဒ်နဲ့ ပါရာဇိကကျပြီး နှင်ထုတ်ခံရလို့ အဲဒီအချိန်တည်းက စပြီး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးမယ်လို့ အငြိုးထားခဲ့တာဆို။
ကျနော် ကြားတာက မိတ်ဆွေတို့ ဒုဂိုဏ်းချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက အရင်တုန်းက ဝိပဿနာ ကမ္မဌာန်းကျောင်းလေးမှာ ချက်ရေး ပြုတ်ရေးလုပ်ရတဲ့ မီးဖိုချောင်ဘုန်းကြီးလေးတပါးဆို။ အဲဒါ ပထမပါရာဇိက သိက္ခာပုဒ်နဲ့ ပါရာဇိကကျပြီး နှင်ထုတ်ခံရလို့ အဲဒီအချိန်တည်းက စပြီး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးမယ်လို့ အငြိုးထားခဲ့တာဆို။
အဲဒီလို ယုံတာလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ပဲကိုး။
အဲဒါ ကျုပ်တို့သာဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်လျှာပွတ်ဦးခိုမ် ဟုတ်ဖူးနော်.. သူဂ ဆွမ်းတော်မတင်ခင် ဟင်းခိုးစားတာပဲ ရှိတာ..။။
ယုံလွယ်သူပေါသောတိုင်းပြည်သည် အောက်တန်းကျသေးသော တိုင်းပြည်ဖြစ်၏…